Xiaomi CC9 स्मार्टफोन: नयाँ लाइन को घोषणा | TeraNews.net
Xiaomi CC9 स्मार्टफोन: नयाँ लाइन को घोषणा
लेखक तेरा समाचार प्रकाशित गरिएको छ 02.07.2019
चिनियाँ विशालले उच्च बजार र सस्तो मोबाइल फोन निर्माणको लागि विश्व बजारमा एक कडा स्थान लिएको छ। र अब नयाँ क्षितिजमा जाने समय हो। Xiaomi CC9 स्मार्टफोन, वा बरु सम्पूर्ण उपकरणहरू प्रयोगकर्ताहरूको हृदय जित्नको लागि तयार छ।
चिनियाँ निर्माताको नयाँ लाइनमा मोडेलहरू छन्: CC9, CC9e र CC9 मीतु संस्करण। सबै उपकरणहरू मी9मा आधारित छन्, वा बरु, फ्ल्यागशिपको पूर्ण रूपले परिमार्जन गरिएको संस्करण हो। एक फरकको साथ - शक्तिशाली क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसरको सट्टामा, नयाँ उत्पादले स्नैपड्रैगन 710 प्राप्त गर्‍यो।
Xiaomi CC9 स्मार्टफोन: फाइदा
चिनियाँ एक अनुमान योग्य मान्छे हो। सियोमीलाई ग्राहक कसरी बचत गर्ने र कसरी गुमाउने भनेर थाहा छ। CC9 सँग मिल्क्सन्यूमएक्स एमोलेड9इन्च फुल एचडी डिस्प्ले + स्क्रिन एक फिंगरप्रिन्ट स्क्यानरको साथ छ। 6,39 स्क्रीन चमक cd / m2.
प्रयोगकर्ताहरूलाई गुणस्तरीय सेल्फी चाहिन्छ - कुनै समस्या छैन। मुख्य क्यामेरा 586 MP को रिजोलुसनको साथ सोनी IMX48 हो, र F / 32 को एपर्चरको साथ 1,6 MP मा फ्रन्ट क्यामेरा। एनएफसी एडाप्टर, अवरक्त emitter, हाय- Res HD ध्वनि - आधुनिक स्मार्टफोनका लागि एक मानक सेट।
तर स्वायत्तताका साथ, Xiaomi CC9 स्मार्टफोनले पनि Mi9फ्लगशिपलाई मात दियो। निर्माताले 4030 mAh को क्षमताको ब्याट्री स्थापना गर्यो। दिइएको छ कि त्यहाँ एक "कमजोर" स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर छ, नवीनताले एकल चार्जमा दीर्घकालीन अपरेशन प्रदर्शन गर्दछ।
शाओमीले नोट गर्‍यो कि स्मार्टफोन तीन र colorsमा बिक्रीमा जान्छ। "हिउँमा सूर्यको स्पार्कहरू" - जस्तै सेता, क्लासिक कालो भिन्नतामा, र नीलो केसमा हस्ताक्षर सर्पिलहरूको साथ। कम्पनीका प्रमुख लेई जुनले पनि स्मार्टफोनको मूल्य घोषणा गरेका छन।6/ 64 संस्करणको न्यूनतम लागत 260 अमेरिकी डलर हो।6GB को र्याम र 128 फ्ल्यासको साथ एक स्मार्टफोन - 290 $। मूल्यहरु चिनियाँ बजारका लागि हो। तपाईं यहाँ फोन किन्न सक्नुहुन्छ.
एप्पल आईफोन १३ - मोडेल, मूल्य, फोटो, प्रस्तुति मिति
तपाइँ एक स्मार्टफोन मा चुम्बकीय सेन्सर किन आवश्यक छ?
Xiaomi POCO X3 जीटी स्मार्टफोन $ २ 299 को लागि
IP20 सुरक्षा संग नोकिया XR68 - अन्त मा प्रतीक्षा
बाटोमा गुगल पिक्सेल6र पिक्सेल6प्रो (पतन 2021)